musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Colombia Breaking News » Zuva rakafa kuColombia Tourism neMedellin
Kuputsa Kufamba Nhau • Colombia Breaking News • nhau • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Raive zuva rinouraya kuColombia Tourism. Mavhidhiyo anoshamisa anotenderera pasocial media anoratidza ngarava ine nhorondo-zhinji ichitetereka neshure apo vanhu vaikambaira pasi kubva padenga repasi rechitatu ngarava payakatanga kunyura.
"Avo vaive pafuriro yekutanga neyechipiri vakanyura ipapo," mumwe mukadzi akapona asina kuzivikanwa nezita akaudza nhepfenyuro yeTV Teleantioquia.
"Chikepe chaive chichi nyura uye zvese zvataigona kuita kudanidzira nekudana rubatsiro."
Margarita Moncada, mukuru wesangano rekupindura njodzi muAntioquia state, akataura kuti maererano neshumo rekutanga vanhu makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe vakanunurwa uye vamwe makumi mana vakakwanisa kuwana nzira yekuenda kumahombekombe vari vega uye vaive muchimiro chakanaka.
Achitaura nevatori venhau kubva mudhamu, akati vanhu vapfumbamwe vakaurawa uye vangangoita makumi maviri nemasere vachiri kushayikwa.
Hazvina kujeka kuti chii chakakonzera kuti igwa rinyure, asi vakapona vakati raitaridzika kunge rakawandisa uye hapana munhu aive muchikepe aive akapfeka chipfeko chehupenyu.
Vakapona vakaudza vezvenhau vemunharaunda kuti chikepe, chinonzi El Almirante, chakaita kunge chakawandisa uye hapana mumwe wevatakuri mungarava aive akapfeka zvipfeko zvehupenyu.
Mavhidhiyo anoshamisa anotenderera pasocial media anoratidza ngarava ine nhorondo-zhinji ichitetereka neshure apo vanhu vaikambaira pasi kubva padenga repasi rechitatu ngarava payakatanga kunyura.
Vakuru vakatadza kunyatso taura kuti vanhu vangani vaive muchikepe ndokukumbira vafambi kana vadiwa vavo kuti vaende kunzvimbo yekununura nekukurumidza kumisikidzwa kumahombekombe.
Vakaitawo runhare kune vekutsvaira kuti vabatsire mukutsvaga.
Dhamu rakakomberedza nzvimbo inokwira matombo yeEl Penol inzvimbo inozivikanwa pakupera kwevhiki kweinopfuura awa kubva kuMedellin.
Yakanga iri yakanyanya kubatikana neSvondo sezvo veColombia vakapemberera vhiki refu yezororo.